1. Ngingayitholaphi i-HGH noma umthengisi weHuman Growth Hormone eSingapore
2. Uphawu oluhle kakhulu lwe-HGH eSingapore
2.1 Qinisekisa izinga eliphezulu le-hormone yokukhula yabantu
2.2 Ukusebenzisa kalula uHGH Genotropin ipeni
2.3 Isitoreji esilula
2.4 Ukuhamba ne-HGH endizeni nasesikhumulweni sezindiza
3. Kuyini iHGH (Somatropin)?
3.1 Ukusetshenziswa kwe-HGH emdlalweni
3.2 Ukwelashwa kwamadolo kanye nosizo lwe-hormone yokukhula
3.3 HGH ekwakheni umzimba
3.4 I-hormone yokukhula yenza kanjani ekukhuleni kwamasipha?
3.5 Ukwelashwa kokukhuluphala nokulahlekelwa kwesisindo
3.6 Ukwelashwa kwabantu abaguga e-Singapore
4. Imiphumela emibi ye-hormone yokukhula
5. Isilinganiso se-HGH
6. Inani le-HGH eSingapore nezindlela zokukhokha
6.1 Ukubhaliswa kwenyanga ngayinye kwe-hormone yokukhula eSingapore
Umhlinzeki we-HGH eSingapore
I-HGH Thailand ikhemisi ekhemisi ingenye yezidakamizwa ezihlukahlukene zokukhula komuntu ama-pharmacy ama-pharmacy asekela ngokusemthethweni amaklayenti adinga ukwethulwa kwe-somatropin kuwo wonke umhlaba kuhlanganise neziguli zethu ezivela eSingapore. Zonke izilungiso ze-hormone zokukhula zisemthethweni ngokuphelele eThailand naseSingapore, zinezitifiketi zekhwalithi namalayisensi.
Iziguli ezivela eSingapore zingabonisana futhi zithole izidakamizwa eBangkok kokubili ehhovisi lethu nangokuthunyelwa kweposi nokuhamba kwabachwepheshe bethu ekhelini lakho ngubani oyokubonisa ngendlela enokuthatha ngayo HGH injections, futhi ungahle ulandele ukuhanjiswa kwe-hormone e-intanethi eSingapore esuka eThailand kuze kube semnyango wendlu yakho, konke ukubonisana, izincomo zokuthatha kanye nokulinganisa umyalelo kanye nokukhokha kungenziwa enkundleni ngaphandle kokushiya ekhaya.
Ikhemisi lethu lithatha zonke izibopho zokuthola i-hormone yokukhula eSingapore, ukunikezelwa kwempahla kanye nokuthunyelwa kwezidingo.
Iyini umkhiqizo omuhle kakhulu we-HGH eSingapore?
Ngokusho kwamakhasimende ethu avela emhlabeni wonke, kuhlanganise neziguli ezivela eSingapore, i-hormone yokukhula komuntu engcono kakhulu yikhiqiza yenkampani Pfizer - I-Genotropin GoQuick Ipeni 12mg (36IU) waseBelgium-yaveza ikhwalithi yaseYurophu esiyifaka eThailand, ngakho-ke sizoyiqonda kungani uGenotropin engcono?
Qinisekisa izinga eliphezulu le-hormone yokukhula yabantu
Kusukela kumkhiqizi ohamba phambili waseYurophu wezidakamizwa nemishini yezokwelapha - i-Pfizer iyathembeka emkhakheni ophezulu womkhiqizo we-hormone yokukhula
Ukusebenzisa kalula uHGH Genotropin ipeni
Ukutholakala kokusetshenziswa kwesitoreji se-hormone isitoreji se-genotropin kanye nokuhamba kufanelekile ukunakwa okukhethekile. Ukulungiselela umjovo we-hormone yokukhula kuthatha imizuzu engu-2 nje kuphela, abakhiqizi be-genotropin banakekele ukulula nokulula kokuxazulula isisombululo somjovo nokukhula kwe-hormone powder, ukulungisa umthamo oqondile walesi sidakamizwa.
Idivayisi yesibambo icatshangelwa ngemininingwane encane kunazo ngaphakathi esivele iqukethe isisombululo sokuxuba nokukhula kwe-hormone - ungaxuba ngokuguqula i-knob kusuka esikhundleni se-abc ukusetha umthamo isibonelo 0.6 noma 0.9 ml uchofoze inkinobho - chofoza futhi usuqedile!
Okuningi mayelana nokuxuba, bona lesi sihloko
Ipeni le-hormone yokukhula lenziwa nge-cap protective, emva kokuxuba i-hormone yokukhula kufanele igcinwe ekushiseni kwe-8-12 degrees, ususa nje inaliti, ufake i-cap yokuzivikela bese uyibeka esiqandisini
Ukuhamba ne-HGH endizeni nasesikhumulweni sezindiza
Amanye amakhasimende avela eSingapore athetha ukuthatha i-hormone yokukhula esuka eThailand eya eSingapore noma ehamba, okungukuthi ukuthatha indiza. Ngokungafani nama-counterfeits aseShayina ashibhile futhi ayingozi, akudingeki ukuthi uhambisane nawe nethikithi yokuqala yokusiza - izilinganiso, ama-ampoules, izimbiza ezingaphinde zidale ukusola kumasiko noma isidingo sokunikeza imibhalo eyengeziwe.
I-Genotropin ipeni uvele ubeke imithwalo noma imithwalo yesandla bese ukhohlwa ngakho, plus
I-Genotropin ayithathi isikhala esikhulu futhi ayinalo ingilazi ebuthakathaka eyandisa ingozi yomonakalo
Kuyini iHGH (Somatropin)?
I-hormone yokukhula noma i-somatotropin ingenye yamahomoni amakhulu abantu avela engxenyeni yangaphakathi ye-pituitary. I-Somatotropin ikhuthaza isenzo se-anabolic, ishesha ukuhlanganiswa kokukhiqizwa kwama-protein amangqamuzana amasha, kuthinta ukunciphisa amafutha angaphansi kwesikhumba, ikhulisa isilinganiso sobukhulu besisindo kuya kumafutha. Unomphumela wokuphulukisa ngemuva kokulimala nokushiswa kwesikhumba, ukwelashwa kwezifo zamathambo.
Okubalulekile kubo bobabili besilisa nabesilisa, benza njenge-anti-aging agent esebenzayo, kusiza ukubhaliswa kabusha futhi kufakwe amangqamuzana omdala noma afile amasha. Eqinisweni, i-hormone yokukhula iyisidakamizwa esisha esizayo, okuyisizathu esiyinhloko sokuvimbela ukuthengiswa ngqo kwe-hormone yokukhula.
I-laboratory eminingi yocwaningo lwamanje kanye nokucwaninga isebenza ekuthuthukiseni izidakamizwa ngesisekelo se-hormone yokukhula kubantu abakhuluphele, isidakamizwa sokwakha umzimba kanye "nomthombo wobusha" njengesidakamizwa sokulwa nokuguga.
Ukusetshenziswa kwe-HGH emdlalweni
Abagijimi abaningi abavela eSingapore basebenzisa i-hormone yokukhula ukuze bathole ukulimala nokulimala okuhlobene nokulimala emidlalweni eyingozi njengebhokisi, ukulwa ngaphandle kwemithetho, basketball, ibhola kanye nezinye ezemidlalo lapho abagijimi bevame ukulimala khona, iziphuzo nezintambo. I-HGH ingakusiza ukuthi ululame ngokushesha.
Ukwelashwa kwamadolo kanye nosizo lwe-hormone yokukhula
Abagijimi bezobuchwepheshe ekupheleni kokuhlangenwe nakho kwezemidlalo kwezemidlalo emalungwini, emadolweni nasemhlane. Ukwelashwa kwamajoyina nge-hormone yokukhula kubonisa imiphumela emihle kakhulu - isibonelo, iziguli eziye zabhekana namadolo noma emuva
ubuhlungu ngemva kwamasonto e-2 okuqala ukufakwa kwezijovo ze-hormone yokukhula kuqala ukubona ukuthuthukiswa okuphawulekayo, ngemuva kokuthi inyanga ye-1 yobuhlungu idlule futhi iziguli zingakwazi ukuqhubeka nokujabulela ukuphila nokuphumula okusebenzayo nemidlalo yokudlala ngaphandle kwezinkinga
HGH ekwakheni umzimba
Mhlawumbe isicelo esithandwayo kakhulu se-hormone yokukhula seyekwakha umzimba njengabadlali bezemidlalo nabaqalayo ekwenzeni i-gym yokulahlekelwa isisindo esiningi, amafutha angaphansi kwesisu nokukhula komzimba.
I-hormone yokukhula inomthelela onamandla we-anabolic, kodwa ngokungafani nezinye i-steroids, iphephile ngokuphelele ukusebenzisa ngoba ine-formula efanayo yokukhula ye-hormone ku-gland pituitary.
Isiguli sigcwalisa ukukhiqizwa kwemvelo kwe-hormone yokukhula, eyancipha emva kweminyaka engu-25 futhi iqhubeka ihlaka njalo kuze kube yilapho umuntu esegugile kakhulu. Mhlawumbe yingakho intsha engaphansi kweminyaka eyi-25 ingafinyelela kalula imiphumela emihle ekwakheni umzimba.
I-hormone yokukhula yenza kanjani ekukhuleni kwamasipha?
I-hormone yokukhula ekuzivocavoca okusebenzayo ekuzivocavoca nasekuthwaleni amandla okudla okunomsoco onokuqukethwe okuphezulu kwamaprotheni nama-amino acids - izikhathi eziningana zilinganisa ukwakhiwa kwamangqamuzana amasha, imfucuza yamasipha, ukushintshwa kwamangqamuzana amasha ngezinhlamvu ezintsha - yi-hormone yokukhula iyisitini esibaluleke kakhulu ekwakhiweni komzimba wakho wephupho
Ukwelashwa kokukhuluphala nokulahlekelwa kwesisindo
Amaqiniso abaluleke kunazo zonke ubuhlobo bokukhuluphala komuntu emva kweminyaka engu-25 - umzimba uqala ukuqoqa izinqolobane ezinamafutha emasosheni, esiswini nasemilenzeni - kulula kakhulu ukuthi i-hormone yokukhula ngqo ithinta umzimba we-metabolism, emva kweminyaka engu-25 ukukhula kwe-hormone yokukhula komzimba kwehla ngezinye izikhathi kunomuntu osekhulile yizinga lokuzivuselela ngezansi nomzimba
Ukwelashwa kwabantu abaguga e-Singapore
Ngeshwa umzimba wethu unemithombo yewashi yezinto eziphilayo futhi ukuthi yonke into ephila futhi engaphila emhlabeni ingashintsha nokuguga. Umuntu ukhula ngenxa yokugqoka nokudabuka kwezicubu, imisipha, ukuvuselelwa kancane kwamangqamuzana amasha ukubuyisela abantu abadala futhi umuntu uqala ukuguga futhi aphelelwe yisikhathi.
I-hormone yokukhula ivuselela ukwakhiwa nokwakhiwa kwamangqamuzana amasha, izicubu nama-compounds. Emva kwenyanga ye-1, ubona ukuthuthukiswa kwesakhiwo sezinwele, isikhumba, izipikili. kukhishwa ngaphandle.
Yebo, ngenxa yemijovo ye-hormone yokukhula ukuthi imvelo iqala ukuhlanza umhlaba wonke, ithatha amangqamuzana endala ngamasha futhi umuntu uthola into ebaluleke kakhulu - intsha, ubuhle nempilo
Imiphumela emibi yeHuman Growth Hormone
I-Hormone yokukhula iqukethe ama-amino acids e-191 afana ne-hormone yokukhula yemvelo eyenziwe yi-pituitary gland. I-hormone yokukhula ayikho imiphumela emibi futhi ngakho-ke iphephile kubo bobabili abadala kanye nezingane ezinokukhubazeka kwe-hormone yokukhula
Ukwemukelwa komzimba we-hormone yokukhula kungahlukaniswa ngezigaba ze-3:
- I-HGH inkambo yokwakha umzimba
- Ukwelashwa kokukhuluphala namafutha amaningi
- Ukwelashwa okulwa nokuguga
Uhlelo lwama-classical lwe-hormone yokukhula luyi
3 IU njalo ekuseni ngesisu esingenalutho noma ngaphambi kokulala
kubantu abangaphezu kweminyaka engu-30 abanesisindo kuze kufike ku-100 kg
noma i-4 IU kubantu abangaphezu kwe-100-120 kg
Ukuze uthole imithi ephelele, sicela uxhumane nomxhumanisi wethu we-intanethi
Inani le-HGH eSingapore nezindlela zokukhokha
Ukukhula kwethu kwe-hormone ekhemisi eThailand inikeza isiguli sethu esiphansi kuqhathaniswa namanye amazwe afana ne-Australia, i-US noma i-Canada. Ukukhokha i-oda lakho uthola isiqinisekiso esigcwele sokuthola i-hormone yokukhula emnyango wendlu yakho. Kumaklayenti ethu silungele ukunikeza uhlelo lokukhokha oluguquguqukayo ngokubhalisela inani lanyanga zonke
Ukubhaliswa kwenyanga ngayinye kwe-hormone yokukhula eSingapore
Futhi njengoba isebenza? Akuwona wonke amakhasimende alungele ukukhokha i-hormone yokukhula ephelele ye-10-12 amaphakheji kanye, naphezu kokuthi ukuthenga okuningi kunenzuzo kakhulu kunamaphakheji ambalwa isikhathi ngasinye.
Silungele amakhasimende ethu kusuka ku-singapore ukwenza intengo eqondile yenkambo egcwele yokwelashwa kwe-hormone yokukhula (izinyanga ze-6), ngale ndlela yokubhaliselwa iziguli zethu zingakhokha ikhomoni yokukhula njalo ngenyanga, kulula futhi iphephile ukuthola i-hormone yokukhula edingekayo nyanga zonke.
Isibonelo, iklayenti idinga amaphakethe we-2 we-hormone yokukhula ngenyanga - uvele akhokhe amaphakethe we-2 ngentengo egcwele, athola ukunikezwa kwakhe ngenyanga kanye nemiyalo yenyanga ezayo kuphela futhi akhokhe amaphakethe we-2 alandelayo we-hormone yokukhula. Lolu hlelo lukulungele thina, amaklayenti ethu futhi sakha ubudlelwane obufanele obufanele phakathi kwethu neziguli.